Miyuu dhismaha isku xiran yahay ee khatarta ah ee khatarta ujeeda raadinta moobiilka?
Waxaa jira aaminaad ah in dhismaha xiriirka gacanta uu noqon doono mid aan qarsoonayn sannadka 2017. Fikradan waxaa laga wada hadlay waqtiyo badan, laakiin weli, ma jiraan wax hadal cad oo ku saabsan.
Guud ahaan, dhismaha xiriirka gacanta waa hab-raaca si firfircoon oo isku dayaya in la kordhiyo tirada xidhiidhada soo galaya ilaha webka. Waa nidaam waqti wakhti u baahan oo dadaal badan u baahan. Dhismaha xiriirka gacanta waxaa badanaa lala xiriiriyaa hab dabiici ah oo abuuraya isku xirnaanta - ssl cloudflare cpanel.
Markaad cilmi-baaris ku sameysid TOP-ka ku yaal nambarkaaga waxaad aragtaa tirooyinka xiriiriya kuwaas oo tilmaamaya. Waxay leeyihiin boqollaal kun oo xiriir ah oo ka imanaya ilaha websaydhka sare iyo dhexe. Dabcan, sheekooyinka xiriirkooda lama huraan. Goobahaas TOP-da waxay helayaan natiijooyin sidan oo kale ah oo ay ku shaqeynayaan farsamo iyo abuurista xidhiidhada soo galaya manfacyada.
Qodobkani, waxaan ka hadli doonnaa farsamooyinka dhismaha ee manhajka iyo automatic ah. Waxaa intaa dheer, waxaan ka wada hadli doonaa sida Google loo soo dhejiyo khadka udhaxeeya natiijooyinka dhismaha dabiiciga ah iyo kuwa aan cagaha lahayn. Waxaan rabaa in aan ku qoro istaraatiijiyada ugu haboon ee gacan-qabsiga iyo dib-u-qabsiga ah ee ku siin doona natiijooyin wanaagsan oo SEO ah.
Sidee buuggan xidhiidhsan ee hagaajin kara hagaajinta boggaaga?
Xilligayaga oo abuuraya isku xirnaansho sii adkaan waayeen weligood, sababtoo ah tartanka sare ee suuq dijitalka ah. Farsamooyinka dhismaha ee isku xira Google ayaa maanta ansixiyay ayaa noqon kara istiraatiijiyado isbiirsaday berrito. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo dhammaan waxyaabahan xun, dib u qabashadu wali waxay horseedi karaan xoog-is-gaarsiinta oo hagaajin kara darajadaada boggaaga oo u abuuri doona taraafikada boggaaga. Webmasters oo aan dooneynin inay waqti badan ku qaataan abuurista xiriiro dabiiciga ah oo ku tiirsan qalabka dhismaha ee isku-xirnaanta ama raadinta fursado dhisme oo mushahar leh. Si kastaba ha noqotee, sida ficilku muujinayo, ma jirto wax ka fiican dhismaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waa in aanad ku lug yeelnin farsamooyinka dhismaha khiyaanada leh ee la xidhiidha sida dhab ahaantii lagu ogaanayo Google. Waxaan hadda ku jirnaa geeska cusub ee raadinta mashiinka raadinta iyo helitaanka dhabarka spammy spammy hooseeya waxay burburin kartaa dadaalkaaga SEO iyo sidoo kale sumadda brand.
Dhismaha xiriiriyaha gacanta oo ka soo horjeeda midka automated
Iyada oo dhismaha xiriirka hoose ee tayada hoose uu dhammaaday, waxaan u baahannahay inaan si isku mid ah u dhigno. Taasi waa sababta aan u ururinno qaar ka mid ah farsamooyinka dhismaha ee xidhiidhsan ee gacanta ka shaqeyn doona.
Forum iyo faallooyinka blogka
Faallooyinka waa hab sahlan oo wax ku ool ah ee helitaanka xiriirka, inta aad ka tagto PR ilaha webka. Faallooyinkaagu waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan mawduuca wadahadalka ayna u muuqdaan kuwo dabiici ah kuwa kale. Google ma ciqaabi doonto goobtaada haddii faallooyinka gacanta lagu sameeyo. Haddii loo qabto gacanta, waxay u muuqataa mid caqli-gal ah, ulaha barta oo waxay leedahay qiimo u akhristayaasha kale. Si kastaba ha noqotee, sida ku cad xeerarka Google Webmaster, faallooyinka laga helayo xiriirka ugu wanaagsan ee boostada ama saxiixa looma tirin doono tayada waxayna u qalantaa cunaqabateyn.
(2) Isticmaalida istiraatiijiyado kale oo xidhiidhsan oo marwalba shaqeeya waa blog-kan martida ah. Qaar ka mid ah webmasters waxay ku andacoodaan in ay tahay istiraatiijiyadda spam ee abuurista xiriirka. Si kastaba ha ahaatee, runtii waa la sheegaa, haddii si sax ah loo dhammeeyo, waxay keenaysaa natiijooyin waxtar leh. Waxaan doonayaa in aan ka hadlo martida martida ah ee martida ah iyada oo qayb ka ah ololeyaal ku filan oo lagu guuleysto. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto content aan ahayn keliya hal ujeedo si loo hagaajiyo darajadaada boggaaga, laakinse ujeedadu tahay inaad qiimo u yeelato akhristayaashaada. Haddii aad maadadaada ku dhejisid akhristaha maskaxda, markaa waxaad isticmaali kartaa boggaga martida sida farsamo dhisme oo ammaan ah.